Diyaarado dagaal oo loogu deeqay dawlada kenya (Daawo Sawiro) – STAR FM SOMALIA
Diyaarado dagaal oo loogu deeqay dawlada kenya (Daawo Sawiro)
Dowladda Mareykanka ayaa 6 Diyaaradood oo nooca Helicopters –ka loo yaqaan ku wareejisay Dowladda Kenya si ay ugula dagaallanto Al-shabaabka ka dagaallama Somaliya iyo Kenya.
Danjiraha Mareykanka u jooga Kenya , Robert Godec,ayaa diyaaradahaasi ku wareejiyay Wasiirka Gaashaandhigga Kenya Haweeneyda lagu magacaabo Raychelle Omamo.
Robert,waxaa uu sheegay in tani ay tahay deeqdii ugu badneyd ee Dowladda Mareykanka ay siiso waddan ka mid ah kuwa ka hooseeya saxaraha Afrika.
Labo Diyaaradood oo kale oo nooca Choppers-ka ayuu ballan qaaday in sidoo kale Bisha May ee soo socota ay siin donaan Dowladda Kenya si ay u xoojiso dagaalka ay kula jirto Al-shabaab.
Qiimaha lacageed ee diyaaradaha ayaa lagu sheegay in ay gaarayaan $106-milyan oo doollarka Mareykanka ah,waxaana ay qeyb ka tahay yabooh dhanka ammaanka ah oo uu Madaxweynaha talada ka dagaya ee Mareykanka siiyay Kenya Sanad ka hor.
Robert Godec said ,waxaa uu sheegay in deeqdani ay qeyb mug leh ka qaadaneyso dagaalka wadajir ka ah ee uu sheegay in Mareykanka iyo kenyaba ay kula jiraan Xarakada Al-shabaab.
Diyaaradaha ayaa loo adeegsan doonaan dagaallada tooska ah iyo fulinta howlgallada badbaadada ah marka ay dhacdo in la go’doomiyo ama la qafaasho Ciidan ka tirsan Kenya.
Guddiga Doorashada oo sheegay inaysan sanadkan dhaafeyn Doorashada Madaxweynaha
Ciidamada Kenya oo baaritaano ka wadda degmada Mandheera iyo deegaano ku dhow dhow